Usizi kokhulisa abazukulu ngempesheni - Ilanga News
Home Izindaba Usizi kokhulisa abazukulu ngempesheni
Usizi kokhulisa abazukulu ngempesheni
Izingane kazisitholi isibonelelo sikahulumeni ngenxa yokuswela izitifiketi
UNKK Dumephi Msomi osekugcineni kwesokudla enabazukulu bakhe phezu kwe-slab sendlu yomxhaso okwakumele yakhiwe ngo-2017.
SIVUKWA yisibibithwane uma sichaza ngosizi loku-khulisa ngemali yempe-sheni abazukulu abawu-5 abazalwa ngamadodana aso angasekho emhlabeni – esithi safuhlelwa ngabo ngonina banga-shiya ngisho izitifiketi zabo zokuzalwa, isalukazi saseNtembeni, phakathi koMgungundlovu
UNkk Dumephi Msomi (71), uthi ubonga uNkulunkulu ngokuthi asekhona amandla okutotoba ayotheza ehlathini, athi kuyamsiza ukubeka ibhodwe eziko ngoba inyanda yezinkuni uyidayisela abantu ngo-R30 endaweni, ngoba imali yempesheni ithatha izinsu-ku eziwu-15 ikhona bese iyaphela.
Uthe okumkhathaza kakhulu wukuthi uma engadlula emhlabe-ni, akazi ukuthi lezi zingane ziyosala nobani.
“Ngibhekene nenkinga engingazi ukuthi iyoxazululwa ngubani ngoba kuyacaca ukuthi nosonhlalakahle esengiye emahhovisini abo KwaVulindlela, eMgungundlovu, bayahluleka. Lezi zingane zafika zincane, zingenazo nezitifiketi.
“Zashiywa ngonina ngoba bethi zingivakashele ukuchitha isizungu emuva kokushiywa emhlabeni ngamadodana ami amabili angoyi-se balezi zingane.
“Kwaba wukuhamba kwabo kaba-phindanga babuya bezolanda izi-ngane. Eyokuqala engumfana, ineminyaka ewu-21 ubudala, eyesibili inewu-13, eyesithathu inewu-12 bese kuba ngamawele wona aneyi-shumi. Zonke kazisiholi isibonelelo sikahulumeni, ziphila ngempe-sheni yami.
“Nasesikoleni zangena ngomusa wothishanhloko nezigungu zezi-kole ngoba kangizazi nezinsuku zokuzalwa kwazo. Inkinga esengi-nayo ngeyokwenzela lona oseneminyaka ewu-21 ubudala umazisi ngoba zima emthumeni eMnya-ngweni wezaseKhaya, kufunwa amaphepha aveza ukuthi uzalwa ngubani.
“Nasesikoleni wagcina ephaza-miseka ukuphasa uGrade 12 ngenxa yokungazi ukuthi uma ephasa, uzongena kanjani ezikhu-ngweni zemfundo ephakeme engenawo umazisi.
“Sekuphele iminyaka ewu-6 ngigqigqa kosonhlalakahle ngizama ukulungisela lezi zingane izitifiketi kodwa kakulungi lutho,” kusho uNkk Msomi.
Ubalisa nangokuthi indlu ahlala kuyona nabazukulu bakhe kayikho esimeni esihle. Uthe akakhelwa-nga indlu yomxhaso eyayakhiwa ngabeVulindlela Development Association (VDA).
“Ngasala ngedwa endaweni ngangakhelwa indlu, bonke omakhelwane banazo. Kwagcina kusele ukhonkolo (slab) wodwa, osekuphele iminyaka ewu-5 indlu ingabonwa.
“Kasikho nesizathu esiphatheka-yo engatshelwa sona ngokubhu-ntsha kwendlu naphezu kokuba kwathiwa isicelo sami saphumelela,” kusho uNkk Msomi.
UNkz Gqushu Ngcobo oyikha-nsela lakwa-ward 6 kuMasipala waseMsunduzi – lapho iNtembeni ikhona – uthembise ukungenelela ukuze kusizakale umzukulu kaNkk Msomi ngomazisi, kubhekwe nokuthi kwenzekani ngendlu yakhe egcine ingakhiwanga.
“Kwaba nobuhixihixi ngesikha-thi inkontileka eyayinikezwe umsebenzi wezindlu seyisemaphe-thelweni. Zikhona izikhalo esazi-thola zabantu abangakhelwanga izindlu okwasala izilebhu zodwa.
“Sizoxhumana naboMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu KwaZulu-Natal, sizwe ukuthi ba-ngasihlangabeza kanjani ekuqede-leni lezi zindlu ezasala nezingafakiwe uphahla,” kusho uNkz Ngcobo.
UMnu Mbulelo Baloyi okhulu-mela uMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu KwaZulu-Natal, uthe umnyango unalo ulwazi ngezindlu ezagcina zingakhiwanga KwaVuli-ndlela, ngakho uphezu kohlelo lokuziqedela.
“Sathola ukuthi ezinye izindlu kwaphambana izinombolo zazo kwase kuphazamiseka ukwakhiwa. Njengoba sesaphela isikhathi esasinikwe inkontileka eyayiza-kha, sekusele emnyangweni ukuqedela ezasala,” kusho yena.
Okhulumela uMnyango wezoku-Thuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal, uMnu Mhlaba Memela, ucele ILANGA limdlulisele imininingwane yokuxhumana noNkk Msomi ukuze umnyango wabo uthumele osonhlalakahle ukubheka ukuthi zingasizakala kanjani izingane ukuthola izitifiketi.
“Sizoluphuthumisa udaba lukagogo ukuze ekugcineni izingane zibe nezitifiketi, zithole nesibone-lelo sazo. Sizoxhumana nosonhlalakahle besifunda abazohamba namaphoyisa ukuze kwenziwe izitatimende ukusiza lo mndeni,” kusho uMnu Memela.
Previous articleIChiefs icishe yazigwaza ngowayo
Next articleUzime ukhuthaza abesifazane ukungafeli ngaphakathi